1/1 Isitudiyo: Ukuzola, bucala, ukuCoca, kwaye kulula - I-Airbnb
1/1 Isitudiyo: Ukuzola, bucala, ukuCoca, kwaye kulula
Ukuhlala kwihotele kumaxabiso e-AirBNB!
Nge-driveway yakho yabucala kunye nokungena, igumbi lethu lestudiyo lifanelekile kubasebenzi abahambahambayo abafuna indawo ecocekileyo nethuleyo yokuphumla kuhambo lwabo lweshishini.
Kwistudiyo sakho sabucala, sisebenze nzima ukuqinisekisa ukuba unayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale lula, nemveliso eTallahassee.
Sisebenze nzima ukwenza le ndawo ikhululekile, ipholile, kwaye icocekile. Iindwendwe zethu ziyayithanda indawo yethu ekhuselekileyo, ezolileyo kanye kufutshane neendawo zokutyela ezimnandi kunye nezindlu zekofu, kunye nemizuzu nje embalwa ukusuka edolophini.
Ubumelwane bethu buhamba umgama kuzo zonke iintlobo zeendawo zokutyela ezimangalisayo kunye nokuthenga. Sine-Bada Bean Cafe ezantsi kwendlela eyona ndawo iphezulu ye-brunch. Ithagethi imalunga neebhloko ezi-3 kude. Ukuba ufuna ukuzinyanga, i-Steakhouse kaMarie Livingston ingaphandle nje kobumelwane.
Ukuba ujonge ukubaleka kwangaphandle, qiniseka ukuba ujonge iTom Brown Park, ekale yenye yezona paki zibalaseleyo eMelika.
Senze indawo ukuba ibe ngathi ivaliwe kangangoko ukugcina wonke umntu ekhuselekile ngexesha lo bhubhani. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ndiqinisekile ukuba singafumana into ngefowuni, sondeza, okanye enye indlela.